Intengiso yakho yezeNtlalontle ifuna imifanekiso | Martech Zone
Intengiso yakho yezeNtlalontle ifuna iMifanekiso
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 26, 2013 NgoMgqibelo, ngoJuni 13, 2015 Douglas Karr
Amandla eendaba ezentlalo kukukwazi kwabaphulaphuli bakho okanye uluntu ukuphinda umyalezo wakho ukongeza ukufikelela kwawo. Kubathengisi, izakhono abafuna ukuzenza kubuchule bokuqinisekisa ukuba bayayisebenzisa imiyalezo ephawulekayo. Ukuqonda ukuba imifanekiso inyusa ngokubonakalayo amathuba okwabiwa komyalezo wakho kuthetha ukuba iinzame zakho zentengiso yemithombo yeendaba kufuneka zibandakanye imifanekiso.
Sesinye sezizathu zokuba nathi sibathande abaxhasi bethu, Depositphotos. Banokhetho olukhulu lweemifanekiso onokuzisebenzisa ukunxiba amaphulo akho eendaba ezentlalo.
le infographic evela kwi-LTU ichaza ezinye zezibalo ezinomdla ezinxulumene nemithombo yeendaba zentlalo kunye nemifanekiso. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga ne-Visual Brand Intelligence, khuphela iphepha lethu elimhlophe Ubukrelekrele beBrand kwiminyaka yobugcisa.
tags: imifanekisoimifanekiso kwi-twitterimifanekiso yemidiya yoluntuImifanekiso ye-twitter
Amandla okuThengisa kwi-Intanethi ngeCDNify
Ividiyo: Intengiso njengoBeyonce (NSFW)